တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ ပထမဆုံး ခရီးသည်ရထား လာအိုနိုင်ငံ မြို့တော်မှ ထွက်ခွာ - Xinhua News Agency
ဗီယင်ကျန်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ ဗီယင်ကျန်းရထားလမ်းမှ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ Lane Xang EMU ရထားပေါ်တွင် တရုတ်-လာအို ချစ်ကြည်ရေး Nongping မူလတန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ ဗီယင်ကျန်းရထားလမ်းမှ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ Lane Xang EMU ရထားပေါ်တွင် တရုတ်-လာအို ချစ်ကြည်ရေး Nongping မူလတန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသားတစ်ဦးအား ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ ဗီယင်ကျန်းရထားလမ်းမှ တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ Lane Xang EMU ရထားပေါ်တွင် လာအိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်း၏ ပထမဆုံး ကျည်ဆန်ရထား Lane Xang သည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရထားလမ်း ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်က စတင်လည်ပတ်ပြီးနောက် လာအိုနိုင်ငံမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အပါအဝင် ပြည်သူများအား တင်ဆောင်လျက် မြို့တော် ဗီယင်ကျန်းရှိ ဗီယင်ကျန်းဘူတာရုံမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#China, #Laos, #Railway, #BulletTrain, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #တရုတ်, #လာအို, #ရထားလမ်း, #ကျည်ဆန်ရထား, #ဆင်ဟွာ, #မြန်မာ #ဆင်ဟွာမြန်မာ
VIENTIANE, Dec.4(Xinhua) — The First Lane Xang bullet train of the China-Laos Railway carrying Lao people, including teachers and pupils, departed from Vientiane Railway Station in the Lao capital after the cross-border railway started operation on Friday.
Photo 1- The Lane Xang EMU train of the China-Laos Railway departs from Vientiane Railway Station in Vientiane, Laos, Dec. 3, 2021. (Photo by Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
2,3-A student from the China-Laos Friendship Nongping Primary School is seen on the Lane Xang EMU train of the China-Laos Railway on Dec. 3, 2021. (Photo by Alan Liu/Xinhua)
4-The Lane Xang EMU train of the China-Laos Railway departs from Vientiane Railway Station in Vientiane, Laos, Dec. 3, 2021. (Photo by Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
5 -A student from the China-Laos Friendship Nongping Primary School is seen on the Lane Xang EMU train of the China-Laos Railway on Dec. 3, 2021. (Photo by Alan Liu/Xinhua)
6 -A student from the China-Laos Friendship Nongping Primary School is seen on the Lane Xang EMU train of the China-Laos Railway on Dec. 3, 2021. (Photo by Alan Liu/Xinhua)
7-A Lao woman records the tour on the Lane Xang EMU train of the China-Laos Railway on Dec. 3, 2021. (Photo by Alan Liu/Xinhua) ■